बस्ती-बस्तीबाट उठे | Madhesi - United We Stand
December 21, 2006 at 4:37 pm Leaveacomment
राज्यबाट बहिष्कृत भएको अनुभव गरिरहेको थारू समुदाय परि वर्तित नेपालमा आफ्नो सशक्त स्थान हासिल गर्ने अभियानमा जुटेको छ
– ल शङ्कर खनाल
छ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दा कञ्चनपुर पीपलाडीकी १४ वषर्ीया दुःखीमाया थारू काठमाडौँ कोटेश्वरका दीननाथ सुवेदीको घरमा कमैया बसेकी थिइन् । सोही गाउँकी रभिmनदेवी थारू पनि कमलरी थिइन् । तर, अहिले दुःखीमाया गाउँमै खेतीपाती गररिहेकी छन् भने रभिmनदेवीचाहिँ काठमाडौँमै गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्छिन् ।
कैलालीस्थित फकलपुरका राजधन चौधरी पनि चार वर्षदेखि टेम्पो ड्राइभर छन् । चौधरीसँगै ११ जना थारू युवाहरू ग्यारेजमा काम गर्छन् । “गाउँमा टिक्न नसकेपछि रोजगारी खोज्दै पूरै टोल नै भौतारनिे लहर बढ्दो छ,” उनीहरू भन्छन् । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारबाट हस्याङ्फस्याङ गर्दै आएकी सुकमाया थारू पीपलाडीस्थित बडघर हवलसिंह चौधरीको घरमा देखा परनि् । “तीन-चार वर्षअघिसम्म घरको स्वीकृति नलिई यसरी डुल्न पाइँदैनथ्यो,” उनको अनुभव छ । अहिले गाउँमा ‘बोल्न लजाउन हुँदैन’ भन्ने चेतनासँगै शहरको अवस्था बुझ्ने र मीठोमसिनो खाने जाँगर पनि पलाएको छ । त्यसैले त पाँच वर्षअघिसम्म १७ जनाको बोझिलो परविार अहिले पाँच जनामा झरेको छ ।
पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायको संस्कृति र जीवनशैलीमा छोटो समयमै आएको आमूल परविर्तनलाई बाँके, रझेना गाउँका दानबहादुर थारू, ५४, ले नजिकबाट अनुभव गरेका छन् । धामीझाँक्रीको काम गर्दै आएका थारू अचेल आफूकहाँ आउने बिरामीलाई औषधिमूलो गर्न डाक्टरकहाँ जाने सल्लाह दिन्छन् । मधेश र भित्री मधेशका थारू समुदायमा आएको यस्तो पर िवर्तनप्रति कतिपय थारू भने सन्तुष्ट छैनन् । थारू राजनीतिकर्मी नारदमणि राना भन्छन्, “परविर्तनका नाममा आफ्नो संस्कृति, भेषभूषा र भाषा नै त छाड्नु भएन नि !”
बोल्न लजाउने, मिहिनेती, इमानदार र सोझा मानिसका रूपमा चिनिएका थारूहरूको जीवनशैलीमा एक दशकमै उल्लेखनीय परविर्तन आएको छ । कञ्चनपुरको पीपलाडी, कैलालीको फकलपुर, दाङको तुलसीपुर र देउखुरी, बाँकेका रझेना कमैया क्याम्प र बर्दियाको राजापुर क्षेत्रका थारूहरू चलाख भइसकेका छन् । दुई-चार वर्षअघिसम्म फुसका घरहरूको बाक्लो बस्ती पिपलाडी गाविसमा अहिले अधिकांश घरहरू ढुङ्गा र इँटाले बन्न थालेका छन् । स्थानीय भिखुराम थारूका अनुसार, एकथरीले भने सामुदायिक वनबाट प्रशस्त दाउरा ल्याएर दाउराकै खपडा पोलेर छानो छाउने गरेका छन् । फकलपुरस्थित बडघर जनकलाल चौधरी भन्छन्, “सामुदायिक वनका रूख काठका लागि तयार भइसकेका छैनन् । अझै पाँच-सात वर्षमा तखती निकाल्न लायकका भएपछि ढोका र झ्याल पनि काठकै हाल्ने सोचमा छौँ ।”
कृषि प्रविधि र रासायनिक मलले थारू गाउँको आर्थिक स्तर केही माथि उठाएको छ । सात-आठ वर्षअघिसम्म खेतबारीमा धान छर्ने थारूहरूलाई ‘रोप्दा धेरै फल्छ’ भन्ने चेत फिरेको छ । वृद्ध धनलाल चौधरी भन्छन्, “पहिले एक मुरी धान छर्दा दुई मुरी फल्थ्यो, रोप्न थालेपछि १० गुणा बढी फल्न थालेको छ । पहिले छ महिना पनि खान नपुग्नेहरू अब बचेको चार-पाँच मुरी अन्न बेच्ने भएका छौँ ।”
थारू गाउँहरूमा तरकारी खेती फस्टाउन थालेको पाँच वर्ष पनि भएको छैन । तर, यसले महिलाहरूको जीवनशैली र चेतनामा उल्लेखनीय परविर्तन ल्याएको छ । बाँके अन्न र तोरी प्रशस् त उत्पादन हुने ठाउँ हो । यहाँका थारूहरू तोरी उत्पादन गर्ने, पेल्ने र तेल बेच्ने काम गर्दथे । पहिले थारूहरू तोरीको डाँठ बालेर तयार भएको खरानीले नुहाउने र कपडा पनि धुने गर्दथे । तर, अहिले त्यस् तो अवस्था छैन । पीपललाडी गाउँको सानो पसलमा स् याम्पु, साबुन पाइन्छ । फकलपुरको थारू समुदायमा ‘ब्याकवार्ड एजुकेसन सोसाइटी -बेस)’ ले शुरू गरेको प्रौढशिक्षा कार्यक्रमको प्रभाव सतहमा देखिन थालेको छ । प्रौढशिक्षाले बूढापाका र केटाकेटीहरूलाई कखरा सिकाएको छ भने अनपढलाई पढ्न आकषिर्त गरिरहेको छ ।
नागरकि समाजका फूलमान चौधरी थारू समुदायमा आएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै शैक्ष्ािक जागरण ठान्छन् । उनका अनुसार, सात वर्षअघिसम्म विद्यालय जानेहरूको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिन्थ्यो भने अहिले स्कुल जानेहरूको लस्कर बढेको छ । पहिले जग्गाजमीन बेच्ने धुनमा लाग्ने थारूहरू अब जग्ग्ाा जोड्ने मेसोमा छन् । बर्दियाको नेउलापुरका थारू पनि जागेका छन् । नेउलापुरमा समस्याका रूपमा रहेको कमलरी प्रथाको विरोधमा धेरै अभियानहरू सञ्चालन भए । थारू नागरकि समाजका महिन्द्र चौधरी भन्छन्, “अहिले थारूहरू आफ्नो हकअधिकारको खोजी गर्न आफँै जुट्न थालेका छन् ।”
थारूहरूकै अर्को बस्ती रझेना गाउँकी नौ वषर्ीया रजनी चौधरी ४ कक्षामा पढ्छिन् । उनका दुई दाजु ६ र ७ मा पढ्छन् भने दिदी ५ कक्षामा पढ्छिन् । उनकै छिमेकी ११ वषर्ीया विमला थारू भने कक्षा ८ मा पढ्छिन् । यहाँका थारू महिलाहरूको परम्परागत पोशाक लेहङ्गा र चोली अब बूढापाकाहरूले मात्र लगाउने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अधबैँशे युवतीहरूले सारी, चोलो र कुर्ता-सुरुवाल लगाउँछन् । देवी थारू भन्छिन्, “चार-पाँच वर्षको अन्तरालमा आएको क्रान्तिकारी परविर्तन भनेको जाँडरक्सी सेवन गर्न बन्देज गर्नु हो ।” चाडपर्वमा रक्सी पार्ने र जाँडरक्सी खाने चलन गाउँमा हराएको छ । थारू समुदायको विवाह परम्परामा भने निकै परविर्तन आउन थालेको छ । चार-पाँच वर्षअघिसम्म सात दिन लाग्ने विवाहको भोजभतेर अचेल दुई दिनमै सकिन्छ । थारू महिलामा आएको परविर्तनले नै समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । समूह बनाएर छलफल गर्ने, पैसा बचत गर्ने, ऋण लगानी गर्ने चलनले धेरै थारूहरूको आर्थिक स्थिति सुधि्रएको छ । “थारू समुदाय खुला समाजतर्फ लम्केको छ,” राजनीतिकर्मी मैँजु चौधरीको अनुभव छ ।
कमैया मुक्ति समस्या
कमैया मुक्तिको घोषणा थारू समुदायमा आएको क्रान्तिकारी परविर्तनको एउटा फड्को मात्र हो । तर, मुक्त गरएिको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कमैयाहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बाँकेको रझेना कमैया शिविर र बर्दिया राजापुरको मुरैया कमैया शिविरबीच धेरै भिन्नता छ । नेपालगन्जबाट झन्डै २२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको रझेना कमैया शिविर सबैभन्दा राम्रो शिविरमध्येको हो । शिविरका प्रायःजसो घरहरूमा काँचो इँटाको गारो र सिमेन्टको टायलको छानो लगाइएको छ । अर्कोतिर कणर्ालीको राजापुर क्षेत्रको मुरैया शिविरका कमैयाका सबै घरहरू फुसका छन् । वषर्ामा पानी चुहिन्छ । रझेना शिविरमा बस्ने प्रायःजसोले तरकारी खेती, सुँगुर र बाख्रापालन, ड्राइभिङ्जस्ता गैरसरकारी संस् थाले दिएको तालिम पाएका छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा अन्नबाली र सिँचाइका लागि बोरङि् छ । उता मुरैया शिविरमा भने तालिम पाउनेहरू छैनन् । उनीहरू रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित छन् । रझेनामा विदेशी दाताहरू पुग्छन्, ठाउँ सजिलो छ । अनुगमन गर्ने झन्झट छैन ।
राज्यबाट बहिष्कृत भएका छौँ’
बलबहादुर डगौरा चौधरी, सल्लाहकार : थारू नागरिक समाज
राज्यले थारू उत्थानका लागि के गर्नुपर्छ ?
नेपाल राज्य निर्माणमा हाम्रो पनि योगदान छ । तर, अहिले सर्वसत्तावादी हैकममा राज्य सञ्चालन भएको छ । काठमाडौँवादी -केन्द्रीकृत) राज्य भयो । त्यसैले पनि हामी ओझेलमा पर्‍यौँ । यहाँका थारूहरू भूमिपुत्र हुन् । जङ्गल, जमीन र जलको स्वामित्वमा थारूहरूको पहुँच पुग्नुपर्छ । हामीले थारू स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका छौँ । त्यसतर्फ त सरकारको ध्यान पुगेको छैन भने अरूले के देला भनेर आशा गर्ने ?
राज्यले उपेक्षा गरेकै हो ?
उपेक्षाको के कुरा, हामी राज्यबाट बहिष्कृत र तिरष्कृत भएका छौँ । हामीले हाम्रा धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, जातीय स्वायत्तताहरू गुमाउँदै गएका छौँ । थारूहरूका वर्षैपिच्छे माघी, आइतबारीलगायतका ठूलठूला पर्व हुन्छन् । खोइ त ती पर्वहरूमा सरकारले बिदा दिएको ? हामी बहिष्कृत भएको पुष्टि गर्न यो उदाहरण नै पर्याप्त छ ।
जातीय स्वायत्तताका लागि के गर्नुभयो त ?
हामी १९ दिनसम्म लड्यौँ । त्यो जातीय स्वायत्तताकै लागि थियो । हामी थारू समाजमा नयाँ परिवर्तन चाहन्छौँ । दलीय तानाशाही प्रवृत्ति हामी चाहन्नौँ । जातीय स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, त्यसमा हामी पनि पर्छौं । हामीले थारू नागरिक समाजमार्फत थारू अधिकारबारे आवाजहरू बुलन्द गर्दै आएका छौँ । भर्खरै पनि हामीले जातीय स्वायत्तता र अधिकारबारे छलफल गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत घोषणापत्रसमेत जारी गरेका छौँ ।
संविधानसभामा थारूहरूको हैसियत कस्तो हुनुपर्छ ?
संविधानसभामा थारूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार माग गरेका छौँ । मस् यौदाकार समितिमा थारूहरूलाई राखिनुपर्दथ्यो । सरकारले संविधानसभाको विषयमा काठमाडौँ खाल्डोबाहिर पनि विभिन्न तल्लो वर्गका मानिसहरू बस्छन् भन्ने कुरा बिर्सन सक्छ र त्यो घच्घच्याउने काम तपाईंहरूले गर्नुपर्छ । हामी पनि गर्छौं । अहिलेसम्म राज्यले थारूहरूको वषार्ंैदेखिको बडघर र भल्मसा प्रथालाई मान्यता दिएको छैन । हामीले गरेको काम अमान्य हुन्छ भने यस्तो सरकारबाट के आशा गर्ने, खोइ ?
Source::http://kantipuronline.com/Nepal/samaj.php Date:: Sunday, 17 Dec, 2006 (पौष ३ २०६३)
तर्राईमा साम्प्रदायिक भड्काव, पहाडियाहरू खेदिन थाले	शङ्कैशङ्काले लङ्का हान्नसक्छ- हृदयेश त्रिपाठी